एक महिनामा कति बढ्यो तरकारीको मूल्य ? (भिडियो रिपोर्टसहित) - Himalaya Television
एक महिनामा कति बढ्यो तरकारीको मूल्य ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
२०७८ भदौ ३० गते २०:४२
३० भदौ २०७८ काठमाडौं । पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य बढेको छ । मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्ता मर्कामा छन् । उपभोक्ताको भान्सामा दैनिक पाक्ने तरकारीको भाउले झन एक महिनामै आकाश छोएको छ । तरकारीको मूल्य १ महिनाको अवधिमा कति बढ्यो त ?